Fanavaozam-Baovao Bilaogy Shiliana: Resa-Behivavy · Global Voices teny Malagasy
Fanavaozam-Baovao Bilaogy Shiliana: Resa-Behivavy
Voadika ny 27 Jolay 2017 12:38 GMT
(Marihana fa lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Septambra 2006 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Anankiroa ireo bilaogy malaza 100% momba ny vehivavy ao Shily. Lehilahy, lamaody, sipa, fifandraisana, hevitra, mifantoka momba ny tombontsoan'ny vehivavy avokoa izany rehetra izany: Zancadas (ES) sy nuestroclubdelulu (ES). Tamin'ny lahatsoratra farany avy amin'ny Zancadas, Ana Paula Do Brasil nanoratra momba ny fotoana mialoha indrindra ny hivoahanay amin'ny alina:
Azoko antoka fa manana lisitra fara fahakeliny hira manokana iray ny olon-drehetra ho fanomanana alohan'ny hivoahana alina. Hira izay mitondra hafatra, mandritra ny fanaovana makiazy, akanjo, fitondrana fiara mankany amin'ny fety. Toy ny “Androany, maka ny fanahin'i Madonna aho ary tsy hisy olona hampitsahatra ny dihiko” na “amin'ny farany, hivoaka aho taorian'ny fotoana rehetra niasako tahaka ny adala” na “farany, hijery Sex&TheCity alina miaraka amin'ny namako.”
Manohy ny fizarana ny lisitry ny hira eny aminy amin'izao fotoana izao izy. Eny tokoa, avy amin'ireo vehivavy ny fanehoan-kevitra rehetra ao amin'ity lahatsoratra ity:
Vondrona bilaogy iray hafa avy amin'ny vehivavy sy ho an'ny vehivavy ny nuestroclubdelulu (ES). “Fitakiana” no lohatenin'ny lahatsoratra nivoaka farany ary maneho ny fetra amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Ny iray talohan'izany dia momba ny Sakaiza lehilahy eo amin'ny ankizy.
Satria mandeha ny fotoana, sarotra kokoa isan'andro ny mahita sakaiza tsy manana tantara lasa sy tsy manana andraikitra, tahaka ny zanaka lahy na zanaka vavy.